AH: Steve Jobs' Last Business Meeting
Steve Jobs' Last Business Meeting
Posted by AH at 10/25/2011 10:03:00 PM
TZH1985 October 26, 2011 at 5:34 AM
ဆရာသမားရေ... ဒါက အင်ကြီး ထင်တယ်နော်...
AH October 26, 2011 at 10:32 AM
ဖြစ်နိုင်တယ် အကိုရေ... ထိုင်ခုံချင်းကတော့ တူတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒိုင်ရာလော့ကတော့ တစ်ထပ်ထဲ မကျဘူး။
mstint October 26, 2011 at 10:53 AM
An error occurred ပဲတက်နေလို့ ဖွင့်မရဘူး မောင်အောင်ထွဋ်ရေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 27, 2011 at 3:27 PM
လောကကြီးရဲ့ ကောင်းကျိုးကို တထောင့်တနေရာကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ သူ့လိုလူတစ်ယောက်ကို အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေကြမှာပါ။
ဂျပန်-အင်္ဂလိပ် အသံထွက် နားထောင်မလား
စလုံးက DeF!ND ကိုထွင်သောကြောင့် Siri က Singlish ကိ...
ကျွန်တော်နှင့် ဂါဒို ဂါဒို ညစာ
ကမ္ဘာ့ အံဖွယ်အဆောက်အဦးတွေကို သဲနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြသ
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ယုံကြည်မှု့ရှိအောင် တည်ဆောက်ခြင်း
စားကြဦးမလား ၃၃၈ ပေါင်လေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန် ဟမ်ဘာဂါ
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အသက် ၅၀ စာအိုမင်းသွားတဲ့ ဗီယက...
အိုင်ဖုန်း 4S ကြောင့် လင်မယားကွဲ
သတိ! ဗီယက်နမ်မှ ဘဘကြီးများ ဂေါက်မရိုက်ရ
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စစ်သမီးများ သို့ အမျိုးသမီးစစ်သည်များ
Simi for Singapore LOL :)
Anyway, Siri Can't Understand Singlish... Ha Ha ha
HEY SIRI... WHO'S YOUR DADDY!?!?
Song Bon Choi သို့ Korea's Got Talent ရဲ့ထူးချွန်သ...
စားကြဦးမလား အိုဘားမား ကြက်ကြော် (OFC - Obama Fried...
၀ယ်ကြဦးမလား ကနေဒါထုတ် ရွှေဒင်္ဂါးများ
ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး CEO – Mr. Suhas Gopinath
တရုတ်ပြည် အချမ်းသာဆုံးရွာကလေးရဲ့ ဟိုတယ်
သွားကြဦးမလား ဂျာမနီက အထူးစပယ်ရှယ် အကျဉ်းထောင်
2007 ဘီလ်ဂိတ် နှင့် စတိဗ်ဂျော့ဘ်(စ်) တို့ ဆွေးနွေး...
ချက်ရီပတ်ဘလစ်နိုင်ငံက စူပါဟီးရိုး လက်သစ်
အသက် ၂၉ နှစ်မှာ ပထမဆုံး နားကြားရတဲ့ အမျိုးသမီး
အလင်းဆိုင် - အတိုဆုံး ၀တ္တုများ
ကြောင်က သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်လို့ ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ သခင်
၀တ်ကြဦးမလား နို့က ထုတ်တဲ့ အင်္ကျီ
၀ယ်ကြဦးမလား iPhone 5
အမှတ်တရ Steve Jobs (1955-2011)
ဒူဘိုင်းက ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်
ချီလီက နွားသိုး ကယ်ဆယ်မှု့
ဟာသတိုလေးများ - ၅
ချစ်ခဲ့သည်... ချစ်နေသည်… ချစ်ဦးမည်
စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်သွားတဲ့ လင်မယား
Utopia - အနာဂတ်ရဲ့ ကျွန်းငယ်လေး
အစိုးရက ဒုံးပျံလွှတ်၊ လယ်သမားက လေပေါ်ပျံ
ဂိမ်းထဲမှာတင်အားမရလို့ အပြင်မှာပါ ဖြစ်တဲ့ ရန်ပွဲ
မြစ်ဆုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင် ဗီဒီယို
မြစ်ဆုံအကြောင်း နည်းနည်းလေး ပိုသိချင်ရင် ဒါလေးဖတ်ပါ
မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စ တရုတ်မှ ဆွေးနွေးရန် ခေါ်
Bell Nuntita သို့မဟုတ် အဆိုကောင်းတဲ့ သူလေး